Jiilaalkii dayrta 2017: jardiinooyinka, bambaanooyinka iyo waxyaabo kaloo badan! | Ragga Stylish
Deyrta 2017: Tilmaamaha Dhamaystiran ee Dharka iyo Jaakadaha
Michael Serrano | | fashion, Isbeddellada
Hadaad yaabto waxa jaakadaha iyo jaakadaha la xidho dayrtaan, jawaabtu waa gabi ahaanba. Kala duwanaanshaha xulashooyinka ayaa ka furan sidii hore. Shirkaduhu ma doortaan hal nooc oo keliya, laakiin waxay ka soo jeediyaan jubbadaha caadiga ah illaa kuwa wax duqeeya, iyagoo sii maraya jaakadaha qoda.
Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigeynaa a kugu hagto dhammaan qaababka ay tahay inaad tixgeliso; oo waxaan ku wehelinaa mid kasta oo iyaga ka mid ah talooyin kaa caawinaya inaad doorato qaybta ugu fiican ee baahiyahaaga:
1 Koodhka caadiga ah
2 Jaakadaha digirta
4 Koodhadhka qulqulka iyo koodhadhka roobka
7 Jaakadaha Denim
Koodhka caadiga ah
Istiraatiijiyada nabarrada xubnaha
Mr Porter, 980 XNUMX
Waxaa jira noocyo badan oo jaakad caadi ah, oo ka dhigi kara xulashada mid aad u adag. Xeeladdu waa in loo kala qaybiyo kooxo si loo soo koobo xulashooyinka kaliya dhowr moodel iyada oo loo marayo iska tuur. Go'aanso haddii aad doorbideyso dhererka jilibka ama dhererka canqowga. Marka xigta, is weydii haddii aad ka badan tahay hal-hal-abuur ama laba-naaso. Ugu dambeyntiina, go'aanso haddii aad rabto midab adag (dhexdhexaadintu waxay dejisaa codka: cawl, beige iyo navy) ama caarid.
Mr Porter, 1.900 XNUMX
Iyada oo leh xididdada badda, jaakad digir ah oo buluug buluug ah waxay noqon kartaa kaamil ahaanta muuqaalkaaga casriga ah ee caqliga iyo caqliga badan. Si la mid ah jaakadda caadiga ah, in kasta oo ay ka gaaban tahay - miskaha - waxaad ku aqoonsan doontaa labbadeeda laba-laab iyo ballaaran.
Cambaar, € 119.99
Dharkaaga rasmiga ahKoodhadhka xijaabka leh ayaa mudan in la tixgeliyo, gaar ahaan kuwa isku dara qoorta jilicsan ee jilicsan iyo dharka Mareykanka.
Koodhadhka qulqulka iyo koodhadhka roobka
Farfetch, € 1.130
Mr Porter, 850 XNUMX
Koodhadhka jeexdinku si fiican ayey ula shaqeeyaan qaybo caqli badan, laakiin waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad siiso lahjad casri ah, oo ku dhejinaya qaybo aan caadi ahayn.
Haddii aadan haysan, koodhadh wanaagsan oo dharkaaga ilaaliya oo ka ilaaliya roobabka dayrta ayaa ah maalgashi aad u fiican.
Mr Porter, 745 XNUMX
Marka ay timaado inaad naftaada ka ilaaliso qabowga qaab ahaan, jardiinooyinka waa kuwo aan lala tartami karin. Shaqeynaya oo qabow, tixgeli cagaaran militari si loogu daro dharkaaga jaakad aad ku kalsoonaan karto xilliyo badan iyadoon loo eegin isbeddellada.
Rag & Laf
Mr Porter, 460 XNUMX
Jaakada aasaasiga ah ee wax qarxiya weli waa mid ka mid ah jaakadaha ugu fiican jaakad inaad ku dari kareysid muuqaalkaaga mid kale oo dhicitaan ah –waana hore udhacay dhowr – Goynta weyn ayaa siineysa lahjad badan oo magaalooyinka ah, halka silsiladaha xiiriddu yihiin isbeddel aad u ficil badan oo looga hortagayo dabaysha Madow, khaki, buluug buluug ah iyo beige waa sharad aamin ah. Haddii aad dareentid geesinimo, tixgeli hooska dhalaalaya, sida buluugga, ama ku beddelo naylonka caadiga ah velvet.
Zara, € 39.95
Maaddaama aysan bixin diirimaad badan inta kale, tixgeli jaakadaha denim saacadaha dhexe ee maalinta iyo maalmaha diiran ee dayrta.
Jilic, ilmo, dhejisyo, xiirasho, iftiin, mugdi, dherer ... Waxaad ka dooran kartaa xulasho la’aanta tirada ugu habboon ee ku habboon shakhsiyaddaada. Ama maxaa diidaya, waxoogaa hel haddii aad jeceshahay jaakad noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Deyrta 2017: Tilmaamaha Dhamaystiran ee Dharka iyo Jaakadaha
Ma ogtahay waxa loo yaqaan 'Crossfit Football'?
Waxa la sameeyo haddii xayawaankaaga xayawaanka ahi ka baqaan xayawaannada